လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များအတွက် အားပေးနှိုးဆော်ချက် – Shwe Canaan
June 6, 2016 Shwe Canaan Uncategorized, ဆောင်းပါး 1
ချစ်သော လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များ ….
နေကောင်း ကျန်းမာကြပါစေလို့ ခရစ်တော်
၏ မြတ်သောနာမ၌ နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်အာဖြင့် တစ်နှစ်တာ
ကို ကျော်လွှားခွင့်ရရှိကြမည်ဟု မျှော်လင့်သကဲ့သို
့ အမှုတော်မြတ်၌လည်း သစ္စာရှိစွာ ပါဝင်ဆက်ကပ်
ဘုရားရှင်ပေးအပ်သည့် နှစ်သစ်ထဲသို့ ကျွန်ုပ်တို့ စတင်ခြေလှမ်းကြသည့်အခါ အသစ်သော အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူ အမှုတော်မြတ်ကို ထမ်းဆောင်နိုင်ကြဖို့အတွက် ရည်စူပြီး အချက်(၄)ချက်ဖြင့် ကျွန်တော်အကြံပြုဝေငှ လိုပါသည်။ သည်အချက် (၄)ချက်က ကုလားထိုင်တစ်လုံး၏ ခြေထောက် (၄) ချောင်းသဖွယ် သင့်ကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ အနားယူခွင့် ပေးလိမ့်မည်ဟု ကျွန်တော် ယုံကြည်မိပါသည်။
၁။ ဘုရားရှင်ပေးအပ်ထားသည့် ရှုပါရုံအပေါ်မှာ အာရုံပြုပါ။
သင့်ကို ဘယ်အမှုအရာအတွက် ဘုရားရှင် ခေါ်ထားသလဲ? သင်၏ ရူပါရုံနှင့် ခေါ်ခြင်း (Your Vision & Calling) က ဘာလဲ? အဲသည်အရာကို အမြဲအာရုံပြု ဆင်ခြင်ရမည်။ သင့်အနေနဲ့ အလုပ်အကိုင်ကောင်းတစ်ခုခု၊ ဒါမှမဟုတ် ငွေကြေးများများရသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ပြောင်းလုပ်ဖို့ သွေးဆောင်ခြင်း ခံရနိုင်သည်။ ဒါက သင့်ကို ပေးအပ်ထားသည့် ရူပါရုံလမ်းကြောင်းမှ သွေဖည်သွားစေ ဖို့ စာတန်၏ လှည့်စားချက်သာဖြစ်ကြောင်း သတိပြုရမည်။
စာတန်က သင့်အား ဘုရားပေး ရူပါရုံကို စွန့်လွှတ်ပြီး ဘာမျှမဟုတ်လှသည့် လောက အောင်မြင်မှု တစ်ခုခုကို ရယူဖို့ လှေကားထောင်ပေးနိုင်သည်။ သင့်အနေနဲ့ ဘုရားသခင်က သင့်အား ဘာလုပ်စေချင်သလဲ? ဆိုသည်ကို သေချာစွာ သိပြီး အဲသည်အရာကိုပဲ ဆုပ်ကိုင်ထားဖို့ ကျွန်တော် တိုက်တွန်း လိုပါသည်။
၂။ ဘုရားသခင်ပေးအပ်သော ရူပါရုံပြည့်စုံဖို့ ဘုရားသခင်ကိုသာ ကိုးစားပါ
ဘုရားသခင်က သင့်ကို တစ်စုံတစ်ရာ လုပ်ခိုင်းပြိး အဲသည် အမှုအရာပြီးစီးဖို့ ဘာမှ အထောက် အပံ့ မပေးဘူးဆိုလျှင် ဘုရားသခင် မတရားရာကျ လိမ့်မည်။ အဲသည်လိုမျိုး ကိုယ်တော်မလုပ်ပါ။ ကိုယ်တော် ခိုင်းပြီဆိုကတည်းက လိုအပ်သည့်အရာအားလုံး ကိုယ်တော်ထောက်ပံ့ပေးမှာ ဖြစ်သည်။
သင့်အနေနဲ့ ဘုရားသခင်ကို ကိုးစားခြင်း၊ ကိုယ်တော့်စကားကို နာခံခြင်း ပြုသမျှကာလပတ် လုံး သူ၏ မျက်နှာသာ ပေးခြင်းနှင့် ထောက်ပံ့ခြင်းက မည်သည့်အခါမှ လျော့နည်းသွားမည် မဟုတ်ပါ။ သင်၏ အမှုတော်လုပ်ငန်း လည်ပတ်ဖို့အတွက် မည်သူ့ကိုမျှ အသနားခံ၊ အကူအညီတောင်းစရာ လိုမည်မဟုတ်ပေ။ ကိုယ်တော်သည် ယေဟောဝါယိယေ ( Jehovah Jireh) ထောက်ပံ့တော်မူသော အရှင်ဖြစ်ကြောင်း ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါနှင့်။ အာဗြဟံကို ကြည့်ပါ။ သူ ဘုရားစကားကို နားထောင်ခဲ့ သည့်အတွက် ၄င်း၏ အကျိုးရလဒ်အဖြစ် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံစားခဲ့ရသည် မဟုတ်လော။
၃။ ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ ရိုသေပါ
လူတွေက အပေးအယူလုပ်ပြီး အပြစ်နှင့် ကစားတတ်ကြသည်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ၄င်းတို့ နှလုံးသားထဲ၌ ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ ခြင်းမရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အထင်ကရ ဖြစ်သော အမှုဆောင်များ၊ ခေါင်းဆောင်ကြီးများ အဘယ်ကြောင့် အပြစ်ထဲ ကျဆင်းခဲ့ရသနည်း? သူတို့တတွေ အသိပညာ နည်းပါးလို့ပဲလား? မဟုတ်ပါ။ ၄င်းတို့အထဲ၌ ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ ခြင်း မရှိသောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။
အဗြဟံ အနေနဲ့ ဘုရားစကားကို တကယ်ပဲ နာခံခဲ့ပါသည် အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်ကို သူ ကြောက်ရွံ့ သောကြောင့် ဖြစ်သည် (ကမ္ဘာ၊ ၂၂း ၁၂)။ ယောသပ်သည်လည်း ပေါတိဖာ မယား၏ စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းနောက်သို့ လိုက်ပါအရှုံးမပေးခဲ့ပါ။ အကြောင်းက ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ သောကြောင့်ပဲ ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ ရိုသေခြင်းက သင့်အား စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်း (Temptation) အပေါ် အောင်မြင်စွာ ကျော်လွှာနိုင်ခြင်း အခွင့်နှင့် မိမိကိုယ်ကို လှည့်ဖြားခြင်း (Self-deception) အပြစ် မှ ကယ်နုတ်ပေးပါလိမ့်မည်။
၄။ ဘုရားသခင်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ချစ်ပါ
သင့်အနေနဲ့ ဘုရားသခင်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ချစ်လျှင် သင့်ဇာတိနှင့် လောကကို ချစ်တော့ မည်။ မဟုတ်။ ကိုယ်တော်၏ ဘုန်းတော်အတွက်သာ ရည်စူးပြီး အရာခပ်သိမ်းကို ကောင်းမွန်စွာဖြင့် သင်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက် နေလိမ့်မည်။ ဘုရားကို ချစ်ခြင်းနှင့် ယုံကြည်ခြင်းက သင့်အတွက် မဖြစ်နိုင်ဟု ထင်ရသောအရာ အားလုံးကို စွမ်းဆောင်ပေးလိမ့်မည်။
အဲသည် အချိန်အခါ၌ သင်သည် ယေရှုခရစ်ထံ၌ ကောင်းသော စစ်သူရဲ (၀ါ) ခွန်အားကြီးသော စစ်သူရဲ တစ်ဦးဖြစ်နေပြီး ဘုရားသခင် သင့်အတွက် ကြံစည်ထားသမျှအားလုံး ပြည့်စုံလာတာကို မြင်တွေ့ ရပါလိမ့်မည်။
“သင့်အသက်တာနှင့် အမှုတော်လုပ်ငန်းအပေါ် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီး မင်္ဂလာများ သက်ရောက်ပါစေ။”